किन पृथ्वीको एक भाग तीव्र गतिले चिसो भइरहेको छ ? विस्तारै पृथ्वी मङ्गल ग्रहजस्तो बन्ने अनुमान - Himali Patrika
किन पृथ्वीको एक भाग तीव्र गतिले चिसो भइरहेको छ ? विस्तारै पृथ्वी मङ्गल ग्रहजस्तो बन्ने अनुमान
हिमाली पत्रिका १० चैत्र २०७७, 8:19 pm
यो शोध हालै ‘जिओफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ (Geophysical Research Letters) मा प्रकाशित छ । वास्तवमा पृथ्वीभित्र एक प्रकारको रातो र तातो लेदो (रेड हट लिक्विड) पदार्थ हुन्छ । यसले सम्पूर्ण ग्रहलाई भित्रबाट तातो बनाएर राख्ने काम गर्छ ।
यो तातो लेदो घुमिरहन्छ, जसले गर्दा गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वीको ‘म्याग्नेटिक फिल्ड’ बन्ने गर्छ । गुरुत्वाकर्षण र ‘म्याग्नेटिक फिल्ड’का कारण जीवन प्रदायक वातावरण पृथ्वीको सतहमा बाँधिएर रहन्छ । यसको अभावमा पृथ्वीको सतहमा वातावरण रहन सक्दैन ।
वैज्ञानिकहरुको के अनुमान छ भने यो तातो लेदो धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ र सेलाउँदै गएपछि विस्तारै पृथ्वी मङ्गल ग्रहजस्तो बन्नेछ । मङ्गल ग्रहको सतहमा पृथ्वीजस्तो वातावरणको पूर्ण अभाव छ ।
वैज्ञानिकहरुले कुनै उपायबाट मङ्गल ग्रहमा अक्सिजन निर्माण गर्ने हो भने पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या के रहेको छ भने यसरी निर्माण गरिएको अक्सिजन मङ्गल ग्रहको सतहमा बाँधिएर रहँदैन र यो सबै अक्सिजन अन्तरिक्षमा पुग्छ ।